September 2019 – Media9
ဂီတ ဆယ်လီ ဗြီဒီယို အနုပညာ အမေးအဖြေ
ဦးရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း’ကိုင်ဇာ’ပါဝင်လာမှာက ဒီနှစ်’ရွှေအိုရောင်ဂီတည’ရဲ့ ထူးခြားချက်ပါပဲ…
September 23, 2019 September 25, 2019 media9Comment(0)
[Unicode] တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အရမ်းချစ်ကြတာလေ…တွေ့ရင်စကားပြောလို့မပြီးတော့ဘူး [ZawGyi] တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္အရမ္းခ်စ္ၾကတာေလ…ေတြ႕ရင္စကားေျပာလို႔မၿပီးေတာ့ဘူး
ဆယ်လီ ဗြီဒီယို ရုပ်ရှင် အနုပညာ အမေးအဖြေ
September 16, 2019 September 23, 2019 media9Comment(0)
[Unicode] ေရႊအိုေရာင္ဂီတညမွာ ပရိသတ္ေတြနဲ႔အတူတူငယ္ဘဝကိုျပန္အမွတ္ရေစခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ ကံ့ေကာ္ေတာမ်ိဳးေအာင္ [ZawGyi] ေ႐ႊအိုေရာငၢီတညမြာ ပရိသတ္ေၾတနဲ႔အတူတူငယၻဝကို်ပႏ္အမြတ္ေရစခ္ငၱယၦိဳတဲ့ ကံ့ေကာ္ေတာမ္ိဳးေအာင္
[Unicode] ညီမတို့ ၇တန်း၊၈တန်းလောက်က ရုပ်ရှင်ဆိုရင် တော်ရုံတန်ရုံဘယ်သူမှမကြည့်ကြဘူး…… အခုက ရုပ်ရှင်တစ်ခေတ်ပြန်ပြီးအောင်မြင်လာတာ အရမ်းကိုဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ ‘စဝ်ယွန်းဝတီဦး’…. [Zawgyi] ညီမတို့ ၇တန်း၊၈တန်းလောက္က ရုပ်ရွင္ဆိုရင် တော်ရုံတန်ရုံဘယ်သူမွမကြည့်ကြဘူး…… အခုက ရုပ်ရွင္တစ်ခေတ်ျပန်ျပီးအောင်ျမင္လာတာ အရမ်းကိုဂုဏ်ယူပါတယ္လို့ဆိုတဲ့ ‘စဝ်ယြန်းဝတီဦး’….
အိန္ဒိယကဇာတ်ညွှန်းကိုဝယ်ပြီး ‘ညစ်တွန်း’အဖြစ်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ‘လူမင်း’…… [Unicode] အိန္ဒိယကဇာတ်ညွှန်းကိုဝယ်ပြီး ‘ညစ်တွန်း’အဖြစ်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ‘လူမင်း’…… [Zawgyi] အိႏၵိယကဇာတ္ညႊန္းကိုဝယ္ျပီး ‘ညစ္တြန္း’အျဖစ္ဖန္တီးခဲ့တဲ့ ‘လူမင္း’……
September 16, 2019 September 16, 2019 media9Comment(0)
[Unicode] ပန်းချီကယောကျာ်းသံဆိုတော့ Rock သီချင်းတွေနဲ့ပိုလိုက်တယ်… ကိုဒိုးလုံးတို့ ဦးညီထဋ်တို့ ကိုလှိုင်ဦးမော်တို့ကို အကြိုက်ဆုံးပါဆိုတဲ့ ‘မေပန်းချီ’ [Zawgyi] ပန္းခ်ီကေယာက်ာ္းသံဆိုေတာ့ Rock သီခ်င္းေတြနဲ႔ပိုလိုက္တယ္… ကိုဒိုးလံုးတို႔ ဦးညီထဋ္တို႔ ကိုလႈိင္ဦးေမာ္တို႔ကို အၾကိဳက္ဆံုးပါဆိုတဲ့ ‘ေမပန္းခ်ီ’
[Unicode] အခုကိုယ်က Suprise အလုပ်ခံရတော့ ဝမ်းသာပါတယ်… စနေသား၊စနေနေ့ဖြစ်နေတော့ ဒီနှစ်မွေးနေ့က နေ့နာမ်သင့်လို့ ပိုပြီးအမှတ်တရဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ ‘ကျော်ထက်အောင်’ [Zawgyi] အခုကိုယ္က Suprise အလုပ္ခံရေတာ့ ဝမ်းသာပါတယ်… စေနသား၊စေနေန့ျဖစ်ေနေတာ့ ဒီနွစ်မြေးနေ့က နေ့နာမ်သင့်လို့ ပိုျပီးအမွတ္တရျဖစ္တယ္လို့ဆိုတဲ့ ‘ကေ်္ထာက်အောင်’
ဆယ်လီ ဗြီဒီယို ရုပ်ရှင် သမိုင်း အနုပညာ အမေးအဖြေ
[Unicode] ဗိုလ်ချုပ်ဘဝအကြောင်းက ရုပ်ရှင်တစ်ကားနဲ့တင်မလုံလောက်ဘူး… ကိုယ့်ဘဝမှာ ဒီထက်ကြီးကျယ်လေးနက်တဲ့ကားမျိုး မကြုံဖူးဘူး။ ဒီလိုတာဝန်မျိုးမယူဖူးဘူးလို့ဆိုတဲ့ ‘လူမင်း’… [Zawgyi] ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘဝအေၾကာင္းက ရုပ္ရွင္တစ္ကားနဲ႔တင္မလံုေလာက္ဘူး… ကိုယ့္ဘဝမွာ ဒီထက္ၾကီးက်ယ္ေလးနက္တဲ့ကားမ်ိဳး မၾကံဳဖူးဘူး။ ဒီလိုတာဝန္မ်ိဳးမယူဖူးဘူးလို႔ဆိုတဲ့ ‘လူမင္း’…
ဆယ်လီ ဖက်ရှင် အမေးအဖြေ
ပြောင်းလဲလာတဲ့ Fashion ရေစီးကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူတို့ရဲ့အမြင်က…
[Unicode] ပြောင်းလဲလာတဲ့ Fashion ရေစီးကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူတို့ရဲ့အမြင်ကို ပြောပြခဲ့တဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော်၊ဘုန်းမင်းနေလ၊ ထင်သစ္စာ တို့ မိသားစု နှင့်ခဏတာ။ [Zawgyi] ေျပာင္းလဲလာတဲ့ Fashion ေရစီးေၾကာင္းနဲ႕ ပတ္သက္လို႔ သူတို႔ရဲ႕အျမင္ကို ေျပာျပခဲ့တဲ့ ခင္ဇာျခည္ေက်ာ္၊ဘုန္းမင္းေနလ၊ ထင္သစၥာ တုိ႔ မိသားစု ႏွင့္ခဏတာ။
[Unicode] အိမ်ထောင်သက်တမ်းက ငါးနှစ်ရှိသွားပြီ။”ကော်ဖီ၊ဝီစကီ၊နံရိုးတစ်ချောင်း” လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ သီချင်းကိုဇနီးဖြစ်သူအတွက် တည်ပြီးရေးထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ မိုးမိုး နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ မြတ်ပီတိမိုး [Zawgyi] အိမ္ေထာင္သက္တမ္းက ငါးႏွစ္ရွိသြားၿပီ။”ေကာ္ဖီ၊ဝီစကီ၊နံ႐ိုးတစ္ေခ်ာင္း” လို႔နာမည္ေပးထားတဲ့ သီခ်င္းကိုဇနီးျဖစ္သူအတြက္ တည္ၿပီးေရးထားတယ္လို႔ဆိုတဲ့ မိုးမိုး နဲ႔ ဇနီးျဖစ္သူ ျမတ္ပီတိမိုး
ဂီတ ဗြီဒီယို အနုပညာ အမေးအဖြေ
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းပြောပြခဲ့တဲ့ ‘နွားကျောင်းသူ’ အကြောင်း…
[Unicode] “ညီအမလိုဆိုတော့ တစ်ခုခုဆိုရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဖြစ်တယ်”လို့ဆိုတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းနဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်မေရီအောင် [Zawgyi] “ညီအမလိုဆိုတော့ တစ္ခုခုဆိုရင် ပြင့်ပြင့်လင်းလင်း ေျပာျဖစ္တယ်”လို့ဆိုတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းနဲ့ မိခင်ျဖစ်သူ ဒေါ်မေရီအောင်